I-BWCDS010-16PD-I-OMG 16 yezibuko loMzimba weSitishi sokuMisa iKhamera esineSiboniso | Izisombululo ze-OMG
I-BWCDS010-16PD-I-OMG ye-16 yezibuko loMzimba weSitishi sokuMisa iKhamera esibonisiweyo
Ukuhambisa indawo yokuhambisa
Inkqubo yokwenza: Inkqubo ye-Win7 engagqibekanga, inkqubo ye-XP / ye-Win8 / Win10 enganyanzelekanga
Isoftware yoLawulo lweSitayile: Inkqubo yolawulo lwedatha yevidiyo kunye nevidiyo
Ulwakhiwo kunye nembonakalo: Uyilo oludityanisiweyo olubekwe eludongeni, isinyithi sephepha, imishini yeCsNC, isicwebezelisi esiphakamileyo, ukugqiba kokubhaka, njl.
Isikrini esibanjwayo: I-17.3-intshi echukumisayo yokucofa amaninzi
Interface ye USB: I-Hub yemizi-mveliso ekumazibuko angama-16, uchongelo oluzimeleyo, ukuhambisa umbane ozimeleyo, i-single-port yangoku ye-1.6A, kunye ne-2 * 2.0USB interface
Isikrini seLCD: Isikrini se-LCD se-17.3-intshi
evakalayo: Umdibaniso we-Realtek ALC887, i-8 ye-audio audio-chip
isisombululo: 1920 x 1080
Uhluko: 1000: 01: 00
Imisebenzi emininzi: Inkxaso yenethiwekhi ye-WiFi, i-HDMI HD yangaphandle yokukhuphela umboniso wevidiyo
I-PCBA: IPCA yokudityaniswa kwamashishini
Interface Network: Kwibhodi ye-Realtek RTL8111F Gigabit LAN
IDiski yokuGcina: Inqanaba lokubeka iliso, i-4T esemgangathweni, ii-bays ezi-4, Inkxaso ephezulu ye-40T, inkxaso yomsebenzi we-disk array (uyazikhethela)
Ukuqokelela: Ixhasa iikhamera ezili-16 ezinxitywe ngumzimba ukuqokelela kwangaxeshanye kunye nokutshaja
Ukuqokelelwa kweenkcukacha ngokuzenzekelayo: Idatha iqokelelwa ngokuzenzekelayo emva kokuba ikhamera yomzimba ifikeleleke. Ngokwenombolo yamapolisa, inombolo yezixhobo kunye nomhla wokuqokelela, ukwahlula kugcinwa kwaye kunikezelwa kwigosa elifanelekileyo lamapolisa.
Ugqithiso lweedatha eziphezulu: Isantya esiphezulu i-300M / min, abasebenzisi banokwenza ngokwezifiso kuphela iseti yecamera enxibe umzimba ukulayisha idatha. Okanye kukho iikhamera ezininzi ezinxibe umzimba ezilayisha idatha ngaxeshanye. Itekhnoloji yokufaka idatha emininzi ukuze isetyenziselwe ngokupheleleyo ukusebenza kwehadiwe kwesikhululo sedokodo.
Ukulayisha iifayile: Umsebenzi wokulayisha ophambili, unokubeka phambili nayiphi na ikhamera enxibe umzimba. Ikhamera yomzimba ilayishwa kuqala, kwaye ezinye iikhamera zomzimba zilindile.
Indlela yokusebenza: Ukuchukumisa okubambekayo kunye nebhodi yezitshixo kunye nemouse ezimbini
Ugcino lweDisk: Tshintshela ngokuzenzekelayo indawo yokugcina ,xhasa ukugcinwa kweediski ezininzi, tshintshela ngokuzenzekelayo kwindawo yokugcina indawo xa idiski enye igcwele
Ukutshaja ngokukhawuleza: Ukuqokelelwa kwedatha yekhamera yomzimba kugqityiwe, kwaye inkqubo yokubamba ibiza ngokuzenzekelayo.
Ukucocwa kwedatha ngokuzenzekelayo: Emva kokuba ukuqokelelwa kwedatha kugqityiwe, ividiyo kunye nedatha yeaudiyo ngaphakathi kwikhamera yomzimba icocwa ngokuzenzekelayo.
Uhanjiso lwentengiso: Ukuhanjiswa kokudluliselwa kwengqondo. Ukuchawulwa ngengozi kwekhamera yomzimba ngexesha lokungenisa akunakuchaphazela ukuthembeka kunye nokungafani kwedatha engeniswayo.
Ukujonga idatha: Ixhasa ukujonga, ukudlala, ukuthumela ngaphandle, kunye nokucima idatha yokungenisa ngaphakathi kwisikhululo sedokodo
Ukufika kwexesha kwesixhobo Ixhasa ukulinganisa okuzenzekelayo kwekhamera enxibe umzimba kwisikhululo sedokodo kwaye iyangqinelana neseva yexesha.
Umsebenzi wokubuyisa ifayile: Ukuxhasa ukufumana, ukudlala, ukuthumela ngaphandle, kunye nokulawula iaudiyo kunye nevidiyo oyifunayo ngokusekwe kukhetho oluninzi njengegama lamapolisa, ixesha, kunye nohlobo lwefayile.
Umsebenzi wokuthumela idatha: Umsebenzisi unokukhuphela idatha kwimvume kwisixhobo esithile sokugcina, kwaye idatha ingasetwa ikhutshelwe kuphela kukhuseleko lukarhulumente lwe-U.
Ukhuseleko kwezokhuseleko: Akunandaba nokuba idatha ikwangumncedisi okanye kwisikhululo sedokodo, iyinto elungileyo kumsebenzisi wokugqibela, ongakwaziyo ukwenza idatha ngaphandle kwenkqubo.
Ukutshintsha iqhosha: 1
Ukunikezwa Amandla: Imveliso yamandla ombane angama-250W
Indawo yokusebenza: -10 ℃ ukuya -50 ℃
Iqondo lobushushu: -20 ℃ ukuya -60 ℃
Indlela yokubonelela ngombane: I-110-220V AC
Yobungakanani: 840mm 500mm * * 120mm
I-BWCDS010-16PD-I-OMG ye-16 yezibuko loMzimba weSitishi sokuMisa iKhamera esibonisiweyo gqibela ukuguqulwa: Agasti 7th, 2020 by admin
340 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje